यी कलाकारले फेसनको धज्जि उडाउँदै मच्चाएका थिए ‘बबण्डर’ !!! – News Nepali Dainik
यी कलाकारले फेसनको धज्जि उडाउँदै मच्चाएका थिए ‘बबण्डर’ !!!
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण ०६, २०७७ समय: १५:५०:२१
बलिउड अहिले विश्वकै एक धेरै ठुलो चलचित्र उद्ध्योग रहेको कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन। साथै अहिले बलिउड चलचित्रमा मात्र नभई फेसनको मामलामा प्निया धेरै अगाडी बढी सकेको छ। अहिले बलिउडमा देखिएका फेसनहरु ट्रेन्डमानै आउने गरेका छन्। समयसँगै सँगै अहिले फेसनको अर्थ पनि फेरिएको छ। साथै अहिले फेसन आधुनिक युगमा समेत प्रवेश गरेको छ।
जवाना अनुसारको फेसन रहने गर्छ भने फेसन समय अनुसार परिवर्तन समेत हुने गर्छ। कुनै समयमा चलेको फेसन ट्रेन्ड समय अनुसार परिवर्तन मात्र नभएर हराएर पनि जाने गरेको छ। बलिउड चलचित्र उद्ध्योग शुरु भएको १०० वर्ष भन्दा धेरै भैसकेको छ। यस अन्तरालमा बलिउडमा धेरै फेसन ट्रेन्ड आएर हराइसकेको समेत छ।
कुनै समयमा बलिउडमा फोटोशुट अहिले भन्दा फरक हुने गरेको थियो। अहिले हराएर गएको उक्त फेसन ट्रेन्डहरु हेर्दा हामी नयाँ पुस्ताका मानिसहरुलाई अजिव लाग्नु स्वाभाविकनै हो। अहिले बलिउडमा स्टाइलिश फोटोशूट गर्ने गर्छन् तर पहिलाको स्टाइलिश फोटोशूटको अन्दाजनै फरक रहेको थियो। कुनै-कुनै फोटोशुट हेर्दा हाँस मात्र नभई लाज समेत लाग्ने किसिमबात हुने गर्थ्यो।
अहिले बलिउडमा धेरै आधुनिक देखिने स्टाइलिश कलाकारहरुको पनि धेरै अजिव लाग्ने फोटोशुटहरु देख्न पाइन्छ। सलमान , अक्षय कुमार, आदित्य पान्चोलीको समेत लाजमर्दो फोटोहरु भेटिने गर्छन्। सायद यी कलाकारहरु आफ्नो यस्तो तस्विरहरु नभेटिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्ने गर्छन्। बिस्तार हुँदै गरेको बलिउडका कलाकारहरुले जानेर होस् अथवा नजानेर केहि लाजमर्दो फोटोशुटहरु गराएका छन्। जुन आज हामी यस लेखमा प्रस्तुत गरेका छौँ।
Last Updated on: February 18th, 2021 at 3:50 pm
२१५७ पटक हेरिएको